Ka dhadhaa afaan kaayan dhagaa afaan nama kaaya -
Ka dhadhaa afaan kaayan dhagaa afaan nama kaaya
Bara beelaa sana
Foon silaa hinjiruu
Namuu walii ‘niluu
Roobni gadi ‘nbu’uu
Inni lafa jiisu.
Maddi laga ‘njiruu
Inni dheebuu baasu
Ammi lafaa gogaa
Bishaan silaan jiruu
Fooliin biyyoo moofaa.
Bara beela sana
Beelli itti hammaatee
Jiruun lafa kanaa
Lubbuun keessaa baatee
Kan beelarraa hafte
Sa dur dagattee
Isan arge argii
Akka kiyya deegii
Namni akkam beela’aa??
Jettee nutti qooste.
Biyya ofii faarsiti
Biyya dammaaf dhadhaa biyya quufaa jetti.
Namni akkam dagataa
Isa keessa kute?
Waan nyaatamu dhabdee
Qeyee keenya fidnee
waallee afaan keenyee,
San hunda dagattee
Quba nu ciniintee
Nutti diina taatee?
Biyya keenya dhuftee
Biyya nu dhuunfattee
Lafa nuu safartee,
Daangaallee nuu murtee?
Ajab dubbii waaqaa
Abbaa biyyaa(tu) deega
Keessummaan ofifidne utubaa nu dhiiba
Mana nutti diigaa??!!
Previous Oggaa Loon Gadoodu, Harreen Ammoo Marga Dheeddi
Next JAFER ALI: FINFINNEEN HANDHURA OROMIYAA TAATULLEE ADDIIS ABABA AMMOO GODAANNISA GABRUMMAATI